Lakandranon’i Pangalana :: Hohafainganina ny asa fanarenana mba hialana amin’ny fatiantoka • AoRaha
Lakandranon’i Pangalana Hohafainganina ny asa fanarenana mba hialana amin’ny fatiantoka
Notontosaina tetsy amin’ny minisi­- te­ran’ny Raharaham-bahiny Anosy, omaly, ny fivoriana niarahan’ireo delegasiona maraokanina
hisahana ny fanarenana ny lakan­dranon’i Pangalana sy ireo minisitra malagasy maromaro voakasik’izany. Tapaka nandritra ny dinika fa hoha­fainganina ny asa fanarenana satria vita avokoa ny fijerevana ireo fotodrafitrasa rehetra mila fanamboarana.
Hiroso amin’ny famola­volana ny tetibola ilaina amin’ izany izy ireo mba hahafahana manomboka ny asa amin’ ny fotoana faran’izay haingana. Nanao ireo tatitra vokatry ny fikarohana nataony nandritra ny herintaona i Saïd Zarrou, tale jeneralin’ny orinasa Marchika Med sy ireo mpiara-miasa aminy. “Miteraka sa­kana ho an’ny fifamoivoizana eo amin’ity lakandrano mirefy 700km ity ny fahatsentsenana vokatry ny loto. Hifototra amin’ny fanadiovana sy fanda­vahana ny asa ”, hoy izy.
“Ilaina maika ny fanarenana satria hiteraka fatiantoka hatrany amin’ny dimy alina tapitrisa ariary isan-taona ho an’ny firenena malagasy eo amin’ny lafiny toekarena sy fizahantany ny fahasimbana. Ireo lakana mpitatitra olona sy entan-kely sisa no afaka mandeha ao ary mahatonga ny vokatra kafe, jirofo, dipoavatra… tsy afaka mifamezivezy firy izany”, hoy ihany izy. Mampihemotra mpizaha tany koa anefa ny loto.
Tsahivina fa fifanarahana araka asa nifanaovan’ny fiton­dra­na teo aloha sy ny Mpanja­kan’i Maraoka, Mouhamed VI, tamin’ny volana novambra 2016 ity fanarenana ny lakandranon’i Pangalana ity ka izao tohizan’ny fitondrana ankehitriny izao ny fanatanterahana azy.
Fitsaboana tany an-trano Mihatsara ny toe-pahasalaman’ilay mpilomano voan’ny Covid-19
Famatsiana rano eto Iarivo Nahazo fankatoavana ny tetikasa Jirama Water III
Fanjifana tambavy Nampidina ny vidin’ny CVO ny IMRA
Sedram-pianakaviana :: Kambana mirahalahy, 18 taona, iantsoan’ny reniny sy anabaviny fanampiana
Fampandriana fahalemana :: Niampy valo amby sivifolo sy arivo ny fianakaviamben’ny polisy